I-Suite Spot ~ Ibhedi enkulu yeKumkani!
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMike & Claire
Wamkelekile 'kwi-Suite Spot' kwiinduli ezintle zeVernon, i-15mins ukuya kwiSilver Star Resort kunye neLake eLawulayo, imizuzu eli-15 ukuya eKalamaka Lake naseKin Beach kunye nemizuzu emi-5 ukuya ezantsi idolophu yaseVernon.
Siyabamkela abantwana NAKUPHI na ubudala, hayi ngaphantsi kweminyaka emi-2 kuphela, njengoko igumbi lethu libubungqina obuvakalayo kwaye bukhululekile! Nceda usithumele umyalezo, njengoko sinebhedi yokuhamba, isitulo esiphakamileyo kunye noomatrasi ogwebu aba-2 abangatshatanga abakhoyo ukuze babekwe kwigumbi lokulala (ukuba ungathanda ukuba usebenzise ibhedi yesofa) ukwenza uhambo lwakho lube lula!
I-Suite inayo yonke into efunekayo ukuze uhlale ixesha elifutshane kunye nexesha elide.
I-Master Bedroom inebhedi elingana neKumkani kunye negumbi elikhulu eliphindwe kabini ~ kwaye kumnyango wangaphambili kukho enye ikhabethe enkulu.
Igumbi lokuhlambela langoku linebhafu eneshawa kunye nokugcinwa kakuhle.
Indawo yokuhlala ephambili inombhede we-sofa (ukumkanikazi), iTV enekhebula / netflix / prime / crave, itafile yokutyela ehlala i-4 kunye nendawo yomlilo epholileyo yokubeka umoya.
Ikhitshi ine-dishwasher ezolileyo, isitovu, imicrowave kunye nefriji, i-pantry eyahlukileyo kwaye ixhotyiswe kakuhle kakhulu.
Isantya esiphezulu se-intanethi 350mbps.
Eli lilizwe elimangalisayo lasebusika, ke ukuba uyonwabele ikhephu, kukho iindlela ezininzi zokwenza oko ~ Ukutyibilika ezantsi kweenduli, ukutyibiliza ekhephini, ukutyibiliza, ukuhlahla izihlangu ekhephini kunye neenqwelo ezitsalwa ngamahashe!
Ukuba unomdla kumava akhokelwa bubuchule bezihlangu zekhephu (okanye ukuhamba intaba), nceda undazise kwaye ndiza kukufumana iinkcukacha. Ngokukodwa kwisakhono esiphakathi, akukho nto inzima kakhulu! Izihlangu zekhephu ziyafumaneka ngentlawulo encinci ~ nceda uthumele isicelo.
Ukuba ulapha ehlotyeni, yonwabele ukujonga elinye lamachibi amaninzi, iindlela zokuhamba intaba okanye iiwayini ezikufutshane. Kunye nohambo olujoliswe kusapho oluninzi okt iPlanethi Bee kunye neDavidson Orchards.
Sinepaki yasekhaya kunye neenkundla zentenetya zasimahla ezifumanekayo ukuba uzonwabele nawe, malunga. 10mins ukuhamba ukusuka kwiSuite.
Kwakhona, kwiinyanga ezishushu, unendawo yokuhlala yabucala kunye ne-Bbq yokutyela ngaphandle okanye uphumle nje ngebhiya / iwayini emva kosuku elunxwemeni!
Sikwayi-5mins kuphela ukusuka edolophini, apho uneendawo zokutyela ezininzi, iibhari kunye neendlela zokuzonwabisa ezikhoyo.
Iibhitshi zasekhaya kunye namachibi akumgama we-15mins kuphela.
I-Grey Canal yindlela ethandekayo yokuhamba enezinyathelo zokwenyani kunye nemibono yesixeko, iintaba kunye namachibi. Le yindawo entsha kakhulu, ezolileyo, yokuhlala kwindawo yaseFoothills eVernon.
Umbuki zindwendwe ngu- Mike & Claire
Siza kukuthumelela ikhowudi yomnyango ngosuku lokufika kwakho kunye nemiyalelo yokupaka ngosuku olungaphambili, oku kungenxa yeenjongo zokhuseleko.
Siyafumaneka ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo phantse lonke ixesha kodwa sikunika ubumfihlo obuninzi ukuze ukonwabele iholide yakho kwi-Suite Spot!
Siyafumaneka ukuze siphendu…
UMike & Claire yi-Superhost